Pejy 5 - 5 Hetsika WWE Superstar izay novaina anarana - Wwe
Fihetsiketsehana WWE Superstar 5 izay nomena anarana
# 1 Ny fanitsiana toe-tsaina dia nantsoina hoe FU tamin'ny WWE
Tany am-boalohany ny fanitsiana ny toe-tsain'i Cena dia an'i Brock Lesnar's F-5
Tian'ireo mpankafy WWE ny fanitsiana ny toetran'i John Cena, saingy fantatrareo ve fa ny hetsika malaza dia nantsoina hoe FU nandritra ny fotoana tsy an'i PG. Ity anarana famindra ity dia nanjary vazivazy tao amin'ny Brock Lesnar sy ny F5. John dia nantsoina hoe 'The Doctor of Thuganomics' tamin'izany fotoana izany, ary nanao rap izy tao amin'ny SmackDown hiresaka momba ny fitoviana misy eo amin'ny anaran'izy ireo.
Nifarana izany raha vao nifindra tany amin'ny PG-Era ilay orinasa, ary ny FU dia nomena anarana hoe Attitude Adjustment. Ny orinasa dia nanao fanovana hafa tamin'ny anaran'i John Cena ary noho izany dia nanangana azy ho zanakalahin'ny afisy.
WWE dia nanao ny zava-drehetra mba hahatonga an'i John Cena ho endrika vaovao amin'ny orinasa satria ny Superstars teo aloha dia teo amin'ny talantalana na miala sasatra tsy ho ela. Ny orinasa dia mila Superstar vaovao afaka mitondra ny orinasa mandroso amin'ny etika sy ny fahaizany miasa, ary teo no teraka i John Cena fantatsika ankehitriny.
Izy no mbola Superstar tiana indrindra amin'ny WWE izay nandray anjara tamin'ny lalao Firefly Funhouse voalohany indrindra tany WrestleMania 36 ary naka ny pin mba hametrahana ny The Fiend.
inona ny lohahevitra tsara resahina
inona no ataonao mba hanatsarana ny raharaha
inona no hatao raha mankaleo aho
firy ny zaza mamai no manana ny ho avy